Ahoana no fanajan'ireo mpitarika ny fizahan-tany ao amin'ny Nosy Cooks ny filan'ny fiarahamonina
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any amin'ny Nosy Cook » Ahoana no fanajan'ireo mpitarika ny fizahan-tany ao amin'ny Nosy Cooks ny filan'ny fiarahamonina
Ny Cook Islands Tourism Corporation dia nilaza fa mahatadidy ny tsindry mihombo ataon'ny mpizahatany amin'ny fotodrafitrasa ho an'ny daholobe.
Tamin'ny taon-dasa, nitombo 10 isan-jato ny isan'ny Cooks nandray mpitsidika 161,362 XNUMX mpizahatany, ny roa ampahatelony dia avy any Nouvelle Zélande.
Nanamarika ny governemanta fa ny fitomboana bebe kokoa nefa tsy manatsara ny fotodrafitrasa mety hahatezitra ny mponina eo an-toerana.
Ny valan'aretina ahidrano any Muri Lagoon any Rarotonga dia efa nanosika ny drafitra hanatsarana ny rafi-pako amin'ny faritra fizahan-tany malaza, tetikasa iray izay hanomezan'i Nouvelle Zélande vola mitentina US6.3 tapitrisa $
Ny tale jeneralin'ny orinasa, Halatoa Fua, dia nilaza fa ny ankamaroan'ny mpizahatany Nouvelle Zelande dia tonga nandritra ny ririnina ary mbola misy toerana ho an'ny mpizahatany bebe kokoa amin'ny vanim-potoana ambany sy soroka an'ny Cooks.
Na dia ny fitomboana antonony aza ny isan'ny mpizahatany tamin'ity taona ity, dia nilaza Andriamatoa Fua fa ny fiakarana lehibe indrindra tato ho ato dia ny fitsidihan'ny mpitsidika ny ririnina any amin'ny ilantany avaratra.
Saingy nilaza izy fa ny politikan'ny fizahan-tany maharitra an'i Cooks dia mitaky ny fitomboan'ny sehatra mba hifanaraka amin'ny filan'ny fiarahamonina.
“Ka zavatra tsy tadidintsika izany. Hitanay erak'izao tontolo izao koa ny zavatra niainana toy izany izay nanjary sakana tamin'ny fizahan-tany ny fizahantany, "hoy Andriamatoa Fua.
"Afaka ianarantsika lesona izany mba hananana fandanjalanjana amin'ny fampitomboana ity sehatra ity."
Nilaza Andriamatoa Fua miaraka amin'ny fanatsarana ny rafitry ny rano fako, mila hita ny vahaolana amin'ny olan'ny fitantanana fako Rarotonga.
Ny fitsidihana bebe kokoa ny nosy ivelan'ny Cook dia mety hanamaivana ny tsindry sasany mahazo an'i Rarotonga saingy nilaza Andriamatoa Fua fa mitaky fampiasam-bola amin'ny fotodrafitrasa ataon'izy ireo koa izany.
“Lazao, ohatra, ny nosy Atiu, misy efitrano 20 ka hatramin'ny 30 eo. Raha jerena ny fomba ahafahantsika mampitombo ny fifamoivoizana mankany Atiu dia afaka mijery ny fomba ahafahantsika mandrisika ny fampiasam-bola ao Atiu ary koa ireo fotodrafitrasa ho an'ny daholobe, ohatra ny rivotra sy ny serivisy ara-pahasalamana, "hoy izy.
"Ary raha mahita fitomboan'ny fifamoivoizana ataon'ny mpitsidika ny nosy ivelany isika, dia mijery ny fomba hanatsarana ny fampiasam-bola indrindra amin'ny fotodrafitrasa."
Nilaza Andriamatoa Fua fa ny fisian'ny toeram-pialantsasatra kintana dimy an'ny Cooks ao Aitutaki dia nanampy tamin'ny fanintonana ireo mpitsidika ny hemisfera avaratra nankany amin'ireo nosy ivelany, izay nampitombo ny fotoana sy vola lanin'ny mpizahatany teto amin'ny firenena.
Fambolena, sakafo ary fizahan-tany: fitambarana fandresena ao amin'ny Nosy Solomon
Ny minisitry ny fizahantany any Tahiti dia maniry ny hanararaotra ny fampandrosoana ny European Fund